welding TIG MIG MAG ELEKTRODE agụmakwụkwọ oge-oge Antwerp
Anyị na-agbazi ígwè mgbe ọ na-ekpo ọkụ
Ị na-amụta ịgbado ọkụ na electrode, MIG MAG na TIG n'ime ngwongwo welding welding. Ị mụta otú ị ga-esi arụ ọrụ dị iche iche na-ekpo ọkụ na-eme ka efere na tube njikọ. Ị mụta ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi iji gbochie njehie na mgbagwoju anya na ịmata ụdị ígwè dị iche iche dị ka ígwè, igwe anaghị edozi, ...
Na oghere ihe nkwekọrịta ị na-ahụ maka ịrụzi mmejọ ọ bụla nwere ike ịnweta. A na-eme nke a site na iji usoro ndị ị mụtara na modul pijzenen.
Anyị na-enye ọzụzụ ọzụzụ ọkụ na usoro abụọ. Ịmụmụ ihe abụọ pụtara na ị na-amụta ọrụ gị ma n'ụlọ akwụkwọ ma n'ebe ọrụ. A ga-akwụ gị ụgwọ maka ụbọchị ọrụ gị. Ozugbo ị gụsịrị akwụkwọ, ịnwere ike ime ka onye ọrụ gị n'ọdịnihu nwee ahụmahụ bara uru ị nwere.
Ị na-achọ iji aka gị rụọ ọrụ
ị nwere agụụ maka metal
ị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi
Nkwado ọzụzụ na-ewere na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Ị na-amalite na batrị pijzen.
Na akwụkwọ nke pijplassen Ị kwenyesiri ike banyere ọrụ?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta, ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ na ya anya mpempe akwụkwọ.
Ịgba ume bụ ọrụ ị na-ahụ maka ya.
Ị ghaghị inwe nghọta pụrụ iche maka usoro Lassen. Karịsịa agụụ maka iji ígwè arụ ọrụ dị mkpa.
Dị ka ebe obibi ị na-arụ ọrụ na studio laser ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ na ọkwa dị iche iche, dịka steepụ, balustrades, ọnụ ụzọ ámá, ... Ị nwere ike isonye na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche. I nwekwara ike ịrụ ọrụ dị ka welder na ọdụ ụgbọ mmiri ebe a ga-eweghachi ihe ị ga-enweta.
Welder bụ ọrụ na-eme ka ọkpụkpụ. Ị nwere ike ịchọta ọrụ ngwa ngwa na diploma nke ịgbado ọkụ. Ihe dị mkpa bụ na ị meliteworị ahụmahụ ọrụ dị mkpa n'ime Ịmụ + Ọrụ. Nke a bụ uru zuru oke n'ihi na ndị ọrụ na-achọ nke a.
Taa ọ dịghị mfe ịchọta onye welder ọkachamara. Nke ahụ bụ akụkọ ọjọọ nye ndị ọrụ, mana ọ bụ ezigbo ozi maka ndị nwere ike ịbanye n'ahịa ahụ na profaịlụ a.
Ọ bụrụ na i mechara nke ọma ịkụzi usoro ọzụzụ welder, ị ga-enweta akwụkwọ ọrụ ọkachamara maka MIG / MAG ma ọ bụ TIG ịgbado ọkụ. Site na nke a ị na-etinye onwe gị n'ọrụ siri ike n'ahịa ọrụ.
Kedu ihe onye welder kwesịrị?
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ, ị na-enweta ego 2140 euro n'ogologo dịka onye welder oge niile.
N'adabere na ị ga-arụ ọrụ mgbe ọzụzụ a gasịrị.
Ma na nkeji nke abụọ ị nwere ike ịmalite na agụmakwụkwọ ka elu. Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịmụtakwu ihe, biko gwa anyị na CLB. Dabere na ogo mmụta nke ụmụ akwụkwọ, enwere ike ịme ihe: dịka na Adult Education, na VDAB, Syntra, ...
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịga n'ihu ịga akwụkwọ maka fotocassette, laser underwater, welding metal, ...
Ịkụzi oge agụmakwụkwọ oge nile na-agbado ọkụ
Ịkwado ọkụ bụ ụzọ maka akụkụ metal njikọ. E nwere usoro dị iche iche n'ịkwado ọkụ.
Mgbagwoju anya TIG bụ oge a na-eji usoro welding. Ọ bụkwa ụdị nke ịgbado ọkụ. Na ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịrụ ọrụ na ndị Tig welders n'ihi na ị rụpụtara ihe kachasị mma na usoro ntanye a.
Anyị na-amụta otú e si arụ ọrụ n'adabereghị na ịgbado ọkụ. Ịgụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ oge ụfọdụ na-agụnye akụkụ abụọ, nkwonkwo dị mma na nkwonkwo nkwonkwo.
Ngwá ọrụ ịkụziri ndị mmadụ ọzụzụ oge-oge - LASSEN mig mag tig semi-machine
Ihe omume ahụ 'Welder-Welding"mejupụtara ihe ndị a 3 modul:
Anyị na-akụzikwara gị ka ị na-eji ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na ngwaọrụ MIG-MAG; a na-akpọkwa igwe akụrụngwa.
Kedu ihe ọzụzụ ọzụzụ na-agụnye?
isi ihe omuma eletrik na oru ugbo;
ịrụ ọrụ nchedo na mkpuchi;
Ihe omuma nke oma nke oke ngbadoro nke oma: TIG or MIG / MAG or welding automatic;
Ị na-arụ ọrụ gị onwe gị n'oge ọ bụla gị.
Ebee ka ị na-aga mgbe ọzụzụ gasịrị?
Na akwụkwọ nke welder ị na-emeghachi omume dị elu na ahịa ọrụ;
Ị nwere ike ịga n'ihu ọkachamara na ụfọdụ usoro (arc welding, ọkara akpaka welding ma ọ bụ TIG ịgbado ọkụ);
Ị ruru eru maka ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ịrụ ọrụ, na petrochemistry, na mbupu, na ụlọ ọrụ akụrụngwa, ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ;
Enwere oké ọchịchọ maka ezigbo ndị na-agbapụ (ọrụ nkwekọrịta!). Na Antwerp, ị dị ka onye welder ọkachamara, na-ejide n'aka nke ọma, ọrụ akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere agụụ maka ịgbado ọkụ na ị ga-achọ inweta akara mmụta sekọndrị, ọzụzụ ahụ bụ ihe dịịrị gị.